Ukwenza iipellets zokutya kwezilwanyana ngeemotor ezahlukileyo kusetyenziswa ipill yemitha yokutya
Xa sisithi iinkukhu kunye nokutya kwemfuyo, ayithethi kuphela inkukhu okanye ihagu. Unokwenza ukutya kwabanye njengeTurkey, idada, amarhanisi, inkomo njl. Ke indlela yokwenza ukutya okufanelekileyo ngokwakho ,oko kuyanceda umfuyi wezinkukhu ukuba alondoloze iindleko ezininzi .
Irayisi, umdiliya weetapile omnandi, ingca, nazi, imifuno, umququ, njl. kufuneka inqunyulwe ibe ngamaqhekeza amafutshane ngaphambi kokondla kwimfuyo. Ingca yeenkomo kufuneka inqunyulwe 2-3 i-CM, imifuno yeehagu kufuneka inqunyulwe 1-2 i-CM, kwaye umdiliya wamazambane omnandi kufuneka wenziwe 1 cm okanye kunjalo. Nje, kungcono ukusika kufutshane kwaye kungabi thuba elide.kulungile ukugaya izilwanyana.
Kwisiraphu,amabele, itapile kunye necassava njengokutya kufuneka kugxunyekwe kwaye kuthengiswe kwakhona ukunceda ukugaya. Iqondo lokudanjiswa kufuneka kugqitywe ngokwemfuyo kunye neenkukhu. Ukutya kwehagu kunye neenkomo kunokutyunyuzwa kumacala aphakathi okanye amabi- so coarser we-1 ~ 2 millimeter; Ukutya kwenkukhu kufuneka kwenziwe umgubo wengqolowa. Iipatata kunye necassava zinokusikwa zibe zizicwili kwaye zomiswe emva koko zichotshozwe.isando somatshini Ndiza kwenza umsebenzi wokugaya ogqibeleleyo ,inokugaya iintlobo ezahlukeneyo zezinto ezingalunganga , njengengqolowa, umbona, irayisi, isoya, umhlaba, I-millet okanye ezinye izinto eziqinileyo ezinje ngethambo, inyama eyomileyo njalo-njalo.Ubungakanani bokugqibela bezinto ezinokulawulwa ngokufaka isikrini ngemingxunya eyahlukeneyo yobukhulu
Ukugcina ixesha elide,isilage iya kuba lukhetho olufanelekileyo. I-silage yagcinwa kwizisele ezahlukeneyo, amachibi kunye nevats.it iya kuvuselela iimeko ze-anaerobic ukuvelisa i-lactic acid. Inokuqinisekisa ukondliwa kokutya okuluhlaza kwaye iphucule ukusetyenziswa kunye nokwetyisa ukutya okuluhlaza. ihlengahlengisa ixesha lokutya eliluhlaza kunye nentsalela yexesha elingaphandle kunye nokushota.
Ukulungiswa kwepellet ngokwakho ,inokuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi, ukunciphisa iindleko zokunyusa kunye nokunyusa inzuzo yabasebenzisi. Ayinakucinezela kuphela ipelelet yesondlo yeenkomo neegusha, kodwa uphinde wenze inkqubo yokutya iipelethi zehagu, iinkuku namadada njlnjl. Xa usenza iipellets zokutya ngokwakho, unokongeza izixhobo ezahlukileyo ngokweemfuno ezahlukeneyo zezilwanyana, ukuze kuqinisekiswe isondlo esipheleleyo semfuyo kunye neenkukhu. Ukuzondla ngokutya kwe-pellet kunokukhulisa ukutya kwezilwanyana kunye nokuthintela ukutya okukhethiweyo kwizilwanyana, elungele ukugaya kunye nokungenisa. Inokunciphisa ixesha lokukhula kwezilwanyana, Kulula ukuthutha kwaye ungagcinwa kangangesiqingatha sonyaka.
Kumafama amancinci,xa kuthelekiswa nepellet yokutya kwintengiso, lukhetho oluhle ukuthenga i umatshini wepellet wokutya, iindleko azikho phezulu kodwa zivelisa ezazo iipelethi zesondlo ngokweemeko ezithile zezilwanyana.